Ary iza no tsy afaka ny ho mpankafy ilay setan'ny Baby Yoda LEGO vaovao? | Famoronana an-tserasera
De Baby Yoda dia efa nanoratra imbetsaka isika ary amin'ity indray mitoraka ity dia tafiditra ao anatin'ny vela-pandrika indray isika noho ilay singa LEGO vaovao ary lasa mpankafy isika. Eny, izany no izy.
Vao tsy ela akory izay dia niatrika an'ity kinova olon-dehibe somary bebe kokoa ity izahay ary ahoana no nahatonga an'io Yoda kely izay hiverina tsy ho ela mampiseho amin'ny tinady; eny, Disney + no miandry antsika amin'ireo fizarana vaovao The Mandalorian.
Tsy te-hamela izany lamasinina izany i LEGO ary nanolotra seho LEGO vaovao miaraka amin'i Yoda kely ho mpiorina voalohany amin'izany. Ary ny tena marina dia mifanentana tsara aminy, na dia tianay jerena akaiky aza izy io satria mifanaraka bebe kokoa amin'ilay toetra ilay izy fa tsy rehefa manakaiky isika ary afaka mahita ny antsipiriany.
Mampahafantatra, mpiara-miasa pilotam-pahefana faran'izay kely indrindra amin'ny vahindanitra ... #LEGOStarWars #Adin-kintana #Ny Zanaka pic.twitter.com/VExlCEduaB
- LEGO (@LEGO_Group) Septambra 21, 2020
Miatrika a Seho LEGO miisa 1.073 feno lohan-doha, sofina mihetsika sy vava azo ovaina. Miaraka amin'ny fanombohana mandritra ny 30 Oktobra ary miomana ho iray amin'ireo fanomezana mangatsiatsiaka indrindra amin'ny Krismasy ho avy, dia hanana Yoda kely kely koa isika ao anaty boaty, koa raha mitady fanomezana tany am-boalohany ianao dia aza mieritreritra momba izany ary miambena hatrany Novambra ho an'ny fahazoana azy.
Michael Lee Stockwell, lehiben'ny mpamolavola LEGO, dia nilaza tamin'ny teniny fa rehefa teo am-pelatanany ilay tetik'asa dia tsy nieritreritra afa-tsy ny hitondra ny majia nomen'ny zazakely Yoda izy. Ary misy ny sary hanamafisana na hanombanana raha nahatratra azy ianao tamin'ny farany. Mino izany izahay ary nomeny io fiatraikany io izay nisy fiatraikany lehibe taminay rehefa nahita azy nihetsika tamin'ny fahitalavitra 'The Mandalorian'.
Araka ny efa nolazainay, ny lasa i yoda zaza ho olon-dehibe kely kokoa, fantsika andian-tsarimihetsika momba izay mety nisy, na koa ireo saron-tava mamela antsika hitondra azy io na aiza na aiza no tadiavinay, voaaro tsara hatrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ary lasa mpankafy ilay singa LEGO vaovao izahay: Baby Yoda
Vetivety ianao dia ho afaka hisolo ny lanitra misy sary ao amin'ny Photoshop amin'ny tsindry tokana